Copy Trading – King Of Future
King Of Future
Mobile-MT4 & MT5
Mini Account (500USD TO 1000USD)
Standard Account (3000USD TO 10000USD)
VIP (15000USD TO 30000USD)
VVIP (50000USD TO 100000USD)
Free Indicators Download
YouTube Channel (Free Learn)
Partner and affiliate
Copy Trading ဆိုတာဘာလဲ?
Copy Trading ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဘယ်ကစရမလဲ?
Copy trading ဆိုတာဆန်းသစ်တဲ့ ရောင်း၀ယ်ရေးနည်းပညာတစ်ခုပါ။ Copy trading ကိုသင်ကြားဖူးကောင်းကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Copy trading ဆိုတာဘာလဲသင်မသိသေးရင်တော့ ဒီ post မှာ ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။
Copy trading ဆိုတာ trader တစ်ယောက်ကနေအခြားတစ်ယောက်ဆီက နည်းဗျူဟာ အရောင်းဝယ်
ကွက်အသေးစိတ်မှန်သမျှကို ကူးယူပြီး မိမိ Account ထဲမှာ trading ပြန်လုပ်တာကိုဆိုလိုတာပါ။
Copy trading လုပ်တဲ့အခါ မိမိငွေတွေကို fund manager (သို့) အခြား trader
မိမိကိုယ်ပိုင် acoount ကိုမိမိလက်ထဲထားရှိပြီး copy trading platform ကိုအသုံးပြုရုံပါပဲ။ ထို platform ကပဲ မိမိကူးယူမည့် trader ၏လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အလိုလျှောက်ကူးယူလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
အဓိကအားဖြင့်မိမိပိုက်ဆံတွေကို မိမိလက်ထဲမှာပဲထားရှိရမှာပါ။ အခြားကြားခံတစ်ယောက်ဆီလွှဲပြောင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ မိမိ trading ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပဲ အခြား trader တစ်ယောက်ဆီလွဲပြောင်းပေးရမှာပါ။
Copy trading ရဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက်များ။
Marketငွေကြေးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ စျေးကွက်ကအဓိကပင်မဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Forex market တင်မကပဲအခြား stock market , bitcoin market တွေမှာလဲ copy trading နည်းဗျူဟာတွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေပါတယ်။
အခြားတစ်ခုကတော့ broker ပါ။ သင် trading လုပ်နေသမျှကာလပတ်လုံး broker တစ်ခုခုနဲ့လက်တွဲသွားရမှာပါ။ Broker မရှိတဲ့ market ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ သင် copy trade မည့် trader အသုံးပြုနေတဲ့ broker တော့ဖြစ်ရပါမယ်။ အချို့ broker တွေကိုယ်တိုင်လည်း copy trading platform အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတယ်။
Trader (သို့) signal ပေးမည့်သူ
သင်အတွက် trade ပေးမည့် trader ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါဘူး။ platform တိုင်းက သင့် trader ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Invester ကတော့ copy trade မည့်သူ သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ Copy trading ဟာရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ invester တိုင်းမှာမတူညီတဲ့ ခန့်မှန်းအမြတ်ငွေနဲ့ risk ခံနိုင်အားတွေရှိပါတယ်။ မိမိဘယ်လောက်အမြတ်ငွေခန့်မှန်းထားလည်းနှင့် ဘယ်လောက်အရှုံးခံနိုင်လည်းသိဖို့လိုပါတယ်။
Copy trading platform မပေါ်ခင်က copy trade ချင်တဲ့ trader တွေဟာ အခြား trader ဆီမှ mail နဲ့ဖြစ်စေ၊ chat room တွေမှဖြစ်စေ signal တွေရယူပြီး trade ကြရပါတယ်။ signal တွေကြည့်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင် trade ရတာပါ။ automatic မဟုတ်ပါဘူး။ မတူညီတဲ့ trading platform တိုင်းမှာ Pros တွေရှိပါတယ်။ မိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့ target ပေါ်မူတည်ပြီးညှိ့နှိုင်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
The Replication Process
Copy trading platform တွေဟာ Signal ပေးတဲ့ trader နဲ့ invest လုပ်တဲ့ trader ကြားဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ Signal ပေးတဲ့ trader တွေဆီမှ signal များကိုယူပြီး invest trader တစ်ယောက်ခြင်းဆီကို ကူးယူပေးပါတယ်။
ဥပမာသင့် account ထဲတွင်ဒေါ်လာ 1000 ရှိပြီး $100000 ရှိတဲ့ trader ကို copy trading လုပ်ချင်သည်ဆိုပါစို့။ အဆိုပါ trader account ထဲမှ 1% လောက်သာ trade လိုက်လျှင် သင့် account ထဲရှိပိုက်ဆံအကုန်ဖြစ်နေပါပြီ။ တူညီတဲ့ amount အတိုင်း trade ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တစ်ခါလောက်ရှုံးတာနဲ့ သင့် account ပျက်ပါပြီ။
ဒါ့ကြောင့် သင် copy trade မည့် trader ၏ amount နှင့်အချိုးကျ trading ကိုပြုလုပ်ရပါမည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့ trading platform တွေကတာ၀န်ယူပေးပါလိမ့်မယ်။
– Signal provider မှ trading session တစ်ခုဖွင့်လိုက်လျှင် broker မှ data များကို trading platform သိုိ့ပို့ပေးလိုက်သည်။
– Platform မှ investor ( copy ကူးမည့်သူ) ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီး signal များကိုပုံတူကူးလိုက်ပါတယ်။
– ပြီးရင်တော့ broker ကိုပြန်ပြီး investor၏ setting များနှင့်တွက်ချက်ပြီး trade session အသစ်တစ်ခုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
– ပြီးရင်တော့ broker မှ ထိုအတိုင်း order တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ထိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးဟာ စက္ကန့်လေးတောင်မကြာပါဘူး။ Trade ပိတ်တဲ့အခါမှာလည်း အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်တွေအတိုင်းပဲလုပ်ပါတယ်။
Copy tradin မှာရော Risk တွေရှိနိုင်သလား?
Investment လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ငွေတွေဟာဆုံးရှုံးနိုင်ခြေရှိတာပါပဲ။သင်risk တွေကိုရှောင်လွဲနိုင်ဖို့အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ setting ကိုသေချာချမှတ်ပါ။
Signal ပေးမည့် trader ဘယ်လောက် risk တွေယူနေလည်းလေ့လာပါ။
မိမိ account ထဲမှ ပိုက်ဆံနှင့်ချိန်ဆ၍ copy trading လုပ်ပါ။
King of Future Consultant Co., Ltd commonly known as KOF is one of the leading Foreign Exchange service providers in Myanmar.
Facebook-f Telegram Whatsapp Youtube
7th floor, Room (7E), Classic Strand Condo, Corner of 27th and Merchant Road, Pebedan Tsp, Yangon, Myanmar
Copyright © 2021 King Of Future | All Rights Reserved